သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံတော့မည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | ဥက္ကာကိုကို
သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံတော့မည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted in: သတင်းဆောင်းပါး, အင်တာဗျူး.	Leaveacomment
မေး-ကိုကိုကြီးတို့ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဘယ် လောက်အတိုင်းအတာအထိ
ကိုကိုကြီး-အခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ထင်ရှားရှားဆိုရင် အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခလစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အဲဒီ့ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်စက်ရုံလေးဆယ်လောက်နီးပါးမှာ ကျွန်တော်တို့
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကနေကြားဝင်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးတာ တော်တော်များများ ပြေလည်ခဲ့တယ်။
မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း တစ်ချို့ဟာတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ လက်ထဲရောက်အောင် သိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေဆဲပဲပေါ့၊ မကြာသေးခင်က ကေအိုင်အို ဌာနချုပ်ကိုကျွန်ိတော်တို့ထဲကနေသွားခဲ့တယ်။ သွားပြီးတော့ ဟိုမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေ ဘာတွေကွာဟနေနိုင်သလဲဆိုတာတွေ လေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။ တခြားအပိုင်းမှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ကွန်ယက်ဖွဲ့ပေးပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နယ်ပယ် အတော်များများမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – ဒါဆို နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့လက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အနေနဲ့ အနာဂတ်စိတ်ကူး မြေပုံရဲ့ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လောက်အထိ မျှော်မှန်းထားလဲ။
ကိုကိုကြီး – ကျွန်တော်တို့ဟာ တကယ့်တကယ်ကျတော့ အစိုးရတွေဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်တဲ့ သက်တမ်းတစ်ခုပဲခံတာပါ၊ ထာဝရတည်တံ့တာက ပြည်သူတွေပါ၊ ဆိုလိုတာကကိုယ့်နိုင်ငံသား ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့က ထာဝရ ရည်မှန်းချက်ပါ။ အစိုးရတစ်ဖွဲ့နဲ့ အဆင်ပြေဖို့ နားလည်မှုရဖို့ဆိုတာက တစ်ခဏပါ၊ သက်တမ်းတစ်ခုစာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီနိုင်ငံသားတွေ အကျိုးစီပွါးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေမျိုးတွေ အကြံပြုဖို့၊ နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွါးကို ထိခိုက်နေတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဥပဒေတွေ နောက်တစ်ခါ ဒီလို အကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ရပ်တည်ပြီးတော့ ဖေါ်ထုတ်တင်ပြဖို့ ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်။
By – http://shwethanhtay.wordpress.com/ မှ ကူးယူပါသည်။
← အဘိုးတို့ရေ…. အဘိုးတို့ရယူပေးခဲ့တဲ့ လွ ပ်လပ်ရေးကြီး…
““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ”” →